The Gardener: 2009-11-01
ကျွန်တော်ဒီ တစ်ပတ် စာအုပ်တစ်ချို့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုက္ကု ကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်လည်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က စာကြည့်တိုက်မှာ ကဗျာစာအုပ်ကို မငှားချင်ငှားချင်နဲ့ဖြစ်နေလို့ စာနည်းနည်းမြည်းကြည့်ပါတယ်။ ဖတ်မိတဲ့ ကဗျာက ...
I envy the tom cat:
love's pain and longing!
... အငိုက်မိသွားတုန်း ဖြောင့်လက်သီး မိသွားသလို..... ကြယ်တွေလတွေမြင်သလို ဖြစ်သွားတယ် ...။ ကဗျာက အားကောင်းလွန်းနေတယ် ....။
ဒါနဲ့ပဲ အဲဒီစာအုပ်ကိုငှားဖြစ်သွားတယ် ...။
ပထမဆုံး ဖတ်မိတဲ့ကဗျာလေးကို နည်းနည်း အကျယ်ချဲ့ပြီး ခံစားကြတာပေါ့ ...။
ဟိုက္ကုတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း စာကြောင်းသုံးကြောင်းပဲပါတယ် .... သူ့ပုံစံ ၅-၇-၅ စနစ်ကို ဘာသာပြန်တဲ့အခါတော့ မလိုက်နာကြတာများပါတယ်။ လိုက်နာလိုက်ရင်စကားလုံးအားနည်းသွားတဲ့အတွက်ပါ။ စုစုပေါင်း စကားလုံး ၁၇ လုံးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သဘာဝတရားထဲကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း တိုးဝင် ရှုမြင်နိုင်တဲ့သူတွေရေးလေ့ရှိတယ်။ တရား ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သိမြင်တာတွေလည်းရေးလေ့ရှိတယ်။ ဒီကဗျာလေးကတော့ ရိုးရိုးလေးနဲ့ သိပ်အားကောင်းနေတယ်။
ကြောင်ထီးလေးကို ကဗျာရေးသူက မနာလိုဖြစ်မိတယ်တဲ့။
ဒီစာကြောင်းကတော့ဘာမှမထူးဆန်းဘူး။ ကြောင်လေးက ဘာဖြစ်လို့ မနာလိုချင်စရာကောင်းတာလဲဆိုတာကို ပြောချင်လို့ စကားစလိုက်တာမှန်း သိသာပါတယ်။ မြန်မာကားတွေမှာ အတင်းပြောချင်တဲ့ မိန်းမကြီးက ငါမပြောချင်ပါဘူးအေရယ် ဆိုပြီး မပြောချင်တာကို ပြောဖို့ ဟန်ပြင်နေတာမျိုးပေါ့ ....။ ကဗျာရေးသူကလည်း မနာလိုဖြစ်မိလောက်အောင် တစ်ခုခု ကိုယ့်ထက်သာနေတဲ့ ကြောင်ထီးလေးကို ...အစချီလိုက်တယ်။
သူ ဘာလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထားသွာနိုင်တာလဲ
ကြောင်ကလေးက တစ်ခုခုကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားသွားနိုင်တယ် ...။ အဲဒါကို ကဗျာဆရာက မနာလိုဖြစ်နေတာကိုး ..။ ဘာကိုထားသွားနိုင်တာလဲ .. လိုက်စဉ်းစားမိတယ် ...။ ကဗျာဆရာ မထားသွားနိုင်တဲ့တစ်ခုခုကို ကြောင်ကလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထားသွားနိုင်ခဲ့တယ် ....။ ကဗျာဆရာက မနာလိုတောင်ဖြစ်မိတယ် ...။ ကြောင်ကလေးလို သူမလုပ်နိုင်ဘူး။ မလုပ်တတ်ဘူး။ မလုပ်ရက်ဘူး ...။ ကဗျာဆရာက အဲဒီသဘောကို ချစ်စနိုးနဲ့ မနာလိုဖြစ်မိတယ်လို့ ပြောတယ်။ အခုအချိန်မှာ ကဗျာဆရာဟာ အဝေးမြင်မှုအားကောင်းလာပြီ။ အရာရာကို သုံးသပ်နိုင်လာပြီ။ ဒါပေမယ့်ကြောင်ကလေးကိုတွေ့မှ သူအံ့အားသင့်တယ် ...။ ဘာလို့လဲ.. ဘာလို့လဲ လို့ ထပ်ခါ ထပ်ခါတွေးပြီး ... သူ့အတွက် ခက်ခဲခဲ့တာကို ကြောင်ကလေးက ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းပြီး လွယ်ကူလိုက်တာလဲ ....။ မနာလိုဖြစ်မိတယ်လို့ ပြောမိတယ် ....။ ကြောင်ကလေးကို တွေ့တော့ ပြုံးမိတယ် ....။ သူ့လိုနားလည်ဖို့ ကဗျာရေးသူဟာ အချိန်နှစ်နဲ့ချီယူခဲ့ရတာများလား ....။ ကြောင်ကလေးလို ချက်ချင်းပေါ့ပေါ့ပါးပါး မထားသွားနိုင်လို့ .. ကဗျာဆရာက နှစ်နဲ့ချီလေးလံခဲ့လေသလား ....။ ကြောင်ကလေးကို မနာလိုဖြစ်စရာကောင်းတာဘာလဲ .... ။ သူတည်ဆောက်ထားတဲ့မေးခွန်းကို ကဗျာဆရာက ဖြေရလိမ့််မယ်။ ... မဖြေချင်လည်းရတယ် ...။ ကဗျာဆရာက မေးခွန်းထုတ်ပြီးဖြေချင်လည်းရတယ်...၊ မဖြေချင်လည်းရတယ် .....။ ကဗျာဆရာကဖြေမှာလား ...၊ ကဗျာဆရာက မေးခွန်းပဲထားခဲ့မှာလား ...မသိသေးဘူး ... ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် ....။
အချစ်ဟာ နာကျင်စရာကောင်းတယ်၊ တမ်းတစရာပဲပေါ့။
ကဗျာဆရာက တည့်တည့်မဖြေဘူး။ သက်ပြင်းကို ရှူတုန်းက နှာခေါင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှူပြီး ထုတ်တော့မှ ပါးစပ်က မှုတ်ထုတ်လိုက်သလို ... သွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတယ်။ သူမေးတာနဲ့ ဆိုင်သလို မဆိုင်သလိုဖြစ်နေတဲ့ အဖြေအရ သတိထားမိတာက ကြောင်ကလေးက တစ်ခုခုကို ထားခဲ့နိုင်ပြီး ...အဲဒီအရာက နောက်ဆုံးတစ်ကြောင်းမှာပါတဲ့ အချစ်၊နာကျင်စရာ၊ တမ်းတခြင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်နေတယ် ...။ ကြောင်ကလေးက အချစ်ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားခဲ့နိုင်ပြီး ကဗျာဆရာကမထားခဲ့နိုင်တာလား။ ကြောင်ကလေးက နာကျင်မှုတွေကို ထားခဲ့နိုင်သလို၊ ကဗျာဆရာက မထားခဲ့နိုင်တာလား၊ ကြောင်ကလေးက တမ်းတစရာတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မေ့ပစ်လိုက်သလို ကဗျာဆရာကပေါ့ပေါ့ပါးပါး မမေ့နိုင်တာလား။ .... ကြောင်ကလေးက မနာလိုစရာကောင်တဲ့ ကြောင်ကလေးပဲ .....။ အချစ်ဟာ နာကျင်စရာကောင်းတဲ့ တမ်းတမှုဆိုတာကို ထားခဲ့တဲ့ကြောင်ကလေး....။
တကယ်တော့.... ကဗျာဆရာကလည်း မနာလိုစရာကောင်းတဲ့ကဗျာဆရာပါ ....။ သူ့အတွက်မလိုအပ်တော့တဲ့ အသိတရားကို ကဗျာနဲ့ရေးထားပြီး .. ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ထွက်သွားခဲ့ပြီမဟုတ်လား .....။
နှလုံးသွင်းမှားတဲ့သဘာဝကိုရေးပြထားတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ဒီကဗျာမှာ ကြောင်ကလေးတွေတောင်မှ သူ့ဘာသာသူ ပေါ့ပါးနိုင်တဲ့ကိစ္စကို လူတွေလုပ်ပြီး လေးလံခံစားမနေပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရေးထားတာမျိုးမပါပါဘူး။ သူပြောချင်တာက ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာရှိနေတဲ့သူ (၀ါ) အသည်းကွဲသမား ဆိုလားဘာလား .. အဲဒီလိုလူတွေဟာ ကြောင်ကလေးကို မနာလိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်တဲ့ ....။ ကဗျာလေးက ရိုးရိုးလေးနဲ့လှပါတယ်။ စကားလုံးအသစ်အဆန်းမပါပေမယ့်အားကောင်းပါတယ်။...
ကြောင်ကလေးထားသွားနိုင်တာ မသိမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး ... ကဗျာဆရာမထားသွားနိုင်ဘူးဆိုတာက မှားယွင်းတဲ့သိမှုကြောင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကဗျာဆရာပေါ့ပေါ့ပါးပါးထားလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ ... ဒီကဗျာဟာ လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်တဲ့ အသိတရားဖြစ်လာပြီး ... ကဗျာထဲကကြောင်ကလေး လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် ကြောင်လေးတစ်ကောင် ဆက်ပြီး အသည်းကွဲနေပါလိမ့်မယ်။ ။
ကျွန်တော်ကခွေးချစ်တဲ့သူဖြစ်လို့ ကြောင်တွေအကြောင်းသိပ်မသိပါဘူး....။ ကြောင်တွေအကြောင်း You Tube မှာရှာပြီးကြည့်တော့ သူတို့ဟာခွေးတွေလိုပဲ အသိဉာဏ်မြင့်တယ်ဆိုတာသိရပါတယ်။
ကျွန်တော် မသိမှုနဲ့၊ မှားယွင်းတဲ့သိမှုဆိုပြီး နှစ်ခုရေးထားပါတယ်။ ပါဠိလို အ၀ိဇ္ဖာ ဆိုတဲ့စကားကို နှစ်ခြမ်းခွဲပြီးရေးထားတာပါ။ မသိဘူးဆိုတာက လုံးဝမသိတာပါ။ မေးခွန်း ၁ ရဲ့ အဖြေက ဘာလဲဆိုရင် မသိလို့ ကွပ်လပ်ချန်ထားသလိုမသိတာပါ။ မှားယွင်းတဲ့သိမှုဆိုတာကတော့ မေးခွန်း(၁)ရဲ့ အဖြေကို သစ်ပင်လို့ဖြေတယ်ဆိုပါတော့ တကယ့် အဖြေမှန်က တောင်တန်း ဖြစ်နေတာမျိုးပါ။ သစ်ပင်လို့သိတော့သိတယ်။ သိနေတာက မှားနေတာမျိုးပါ။